Bhuku Rechipiri reMakoronike 34:1-33
Josiya anogadzirisa zvinhu (3-13)
Bhuku reMutemo rinowanika (14-21)
Huridha anoprofita nezvedambudziko (22-28)
Josiya anoverengera vanhu bhuku (29-33)
34 Josiya+ aiva nemakore 8 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 31 muJerusarema.+ 2 Akaita zvakarurama pamberi paJehovha uye akafamba nenzira dzese dzatateguru vake Dhavhidhi, haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe. 3 Mugore rechi8 rekutonga kwake, paakanga achiri mukomana, akatanga kutsvaga Mwari watateguru vake Dhavhidhi;+ uye mugore rechi12 akatanga kuchenesa Judha neJerusarema+ achibvisa nzvimbo dzakakwirira+ nemapango anoyera,* nemifananidzo yakavezwa,+ nemifananidzo yesimbi.* 4 Akaitawo kuti vanhu vaputse atari dzavanaBhaari iye aripo, uye akagura zvigadziko zvekupisira rusenzi zvakanga zviri pamusoro padzo. Akatema-temawo mapango anoyera,* mifananidzo yakavezwa, nemifananidzo yesimbi,* akazvikuya-kuya kuita upfu, akabva ahumwaya pamakuva evaya vaisibayira kwazviri.+ 5 Akapisa mapfupa evapristi paatari dzavo.+ Saka akachenesa Judha neJerusarema. 6 Uye mumaguta aManase, Efremu,+ Simiyoni, kusvika kwaNaftari, nemumatongo akaapoteredza, 7 akaputsa atari akadimbura-dimbura mapango anoyera* nemifananidzo yakavezwa,+ akazvikuya-kuya kuita upfu; uye akagura zvigadziko zvese zvekupisira rusenzi munyika yese yeIsraeri,+ achibva azodzokera kuJerusarema. 8 Mugore rechi18 rekutonga kwake, paakanga achenesa nyika uye temberi,* akatuma Shafani+ mwanakomana waAzaria, naMaaseya mukuru weguta, naJoa mwanakomana waJoahazi aiva munyori wezvaiitika kuti vagadziridze imba yaJehovha Mwari wake.+ 9 Vakauya kumupristi mukuru Hirikiya, vakamupa mari yakaunzwa kuimba yaMwari, yakanga yaunganidzwa nevaRevhi vaiva vachengeti vemasuo ichibva kuna Manase, Efremu, uye kune vamwe vaIsraeri vese,+ neyaibvawo kuvaJudha, vaBhenjamini, nevagari vemuJerusarema. 10 Vakabva vaipa vaya vakagadzwa kuti vatungamirire basa muimba yaJehovha. Vanhu vaishanda muimba yaJehovha vakabva vaishandisa kugadziridza imba yacho. 11 Vakaipa mhizha nevavaki kuti vatenge matombo akavezwa nematanda ekutsigira uye kuti vavake nematanda dzimba dzakanga dzasiyiwa nemadzimambo eJudha dzichiita matongo.+ 12 Varume vacho vakaita basa racho nekutendeka.+ VaRevhi vaiti Jahati naObhadhiya vekuvaMerari,+ naZekariya naMeshuramu vekuvaKohati,+ ndivo vakagadzwa kuti vave vatariri vavo. Uye vaRevhi vese, avo vaigona kuridza zviridzwa,+ 13 ndivo vaitungamirira vaya vaiita mabasa asingadi unyanzvi,* uye vaiva vatariri vevaya vese vaiita mabasa akasiyana-siyana; uye vamwe vaRevhi vaiva vanyori, vakuru, uye varindi vepamagedhi.+ 14 Pavaibudisa mari yakanga yaunzwa kuimba yaJehovha,+ mupristi Hirikiya akawana bhuku reMutemo waJehovha+ wakapiwa pachishandiswa Mozisi.*+ 15 Saka Hirikiya akati kumunyori Shafani: “Ndawana bhuku reMutemo muimba yaJehovha.” Hirikiya akabva apa Shafani bhuku racho. 16 Shafani akabva aenda nebhuku racho kuna mambo, akamuudza kuti: “Varanda venyu vari kuita zvese zvavakanzi vaite. 17 Vadurura mari yakawanikwa muimba yaJehovha, vakaipa kuvarume vakagadzwa uye kune vaya vari kuita basa.” 18 Munyori Shafani akaudzawo mambo kuti: “Pane bhuku randapiwa nemupristi Hirikiya.”+ Shafani akabva atanga kuriverenga pamberi pamambo.+ 19 Mambo paakangonzwa mashoko eMutemo wacho, akabvarura nguo dzake.+ 20 Mambo akabva arayira Hirikiya, Ahikamu+ mwanakomana waShafani, Abdhoni mwanakomana waMika, munyori Shafani, naAsaya mushandi wamambo, achiti: 21 “Endai munondibvunzira Jehovha, ini nevaya vakasara muIsraeri nemuJudha pamusoro pemashoko ebhuku rawanikwa; nekuti kutsamwa kwaJehovha uko kuchadururwa patiri kukuru nekuti madzitateguru edu haana kuita zvakataurwa naJehovha kuburikidza nekuchengeta zvese zvakanyorwa mubhuku iri.”+ 22 Saka Hirikiya nevaya vakatumwa namambo vakaenda kumuprofitakadzi Huridha.+ Aiva mudzimai waSharumu mwanakomana waTikvha mwanakomana waHahasi, uyo aiona nezvenzvimbo yaichengeterwa nguo. Aigara kuRutivi Rutsva rweJerusarema; uye vakataura naye ikoko.+ 23 Akati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Udzai murume akutumai kwandiri kuti: 24 “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichaunza dambudziko panzvimbo ino nevagari+ vayo, iko kutukwa kwese kwakanyorwa mubhuku+ ravakaverenga pamberi pamambo weJudha. 25 Kutsamwa kwangu kuchadururwa panzvimbo ino uye hakuzodzimwi+ nemhaka yekuti vakandisiya+ uye vari kuita kuti zvibayiro zvipfungaire kune vamwe vanamwari, vachindigumbura+ nebasa rese remaoko avo.’” 26 Asi muti kuna mambo weJudha akutumai kuzobvunza Jehovha, “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Kana ari mashoko awanzwa,+ 27 mwoyo wako zvawateerera,* ukazvininipisa pamberi paMwari pawanzwa mashoko ake pamusoro penzvimbo ino nevagari vayo, ukazvininipisa pamberi pangu, ukabvarura nguo dzako, ukachema pamberi pangu, iniwo ndakunzwa,+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 28 Ndokusaka ndichakuisa kwakaiswa madzitateguru ako,* uye ucharadzikwa muguva rako nerugare, uye maziso ako haazooni dambudziko rese randichaunza panzvimbo ino nevagari vayo.’”’”+ Vakabva vadzokera nemhinduro yacho kuna mambo. 29 Saka mambo akatumira shoko, akaunganidza vakuru vese veJudha neveJerusarema.+ 30 Pashure paizvozvo mambo akakwidza kuimba yaJehovha aine varume vese veJudha, vagari vemuJerusarema, vapristi, vaRevhi, vanhu vese zvavo kubvira kuvadiki kusvika kuvakuru. Akaverenga mashoko ese ebhuku resungano rakanga rawanikwa muimba yaJehovha+ vanhu vachinzwa. 31 Mambo akamira panzvimbo yake, akaita sungano*+ pamberi paJehovha, yekuti aizotevera Jehovha uye aizochengeta mirayiro yake, zviyeuchidzo zvake, nemirau yake nemwoyo wake wese nemweya* wake wese,+ kuburikidza nekuchengeta mashoko esungano akanga akanyorwa mubhuku iri.+ 32 Akaitawo kuti vese vaiva muJerusarema nevekwaBhenjamini vabvumiranewo nesungano yacho. Uye vagari vemuJerusarema vakaita maererano nesungano yaMwari, iye Mwari wemadzitateguru avo.+ 33 Josiya akabva abvisa zvinhu* zvese zvaisemesa munyika dzese dzevaIsraeri,+ uye akaita kuti vanhu vese vemuIsraeri vashumire Jehovha Mwari wavo. Panguva yese yaakararama* havana kutsauka pakutevera Jehovha Mwari wemadzitateguru avo.
^ ChiHeb., “neruoko rwaMozisi.”
^ Kana kuti “akamutsidzira sungano.”
^ Kana kuti “zvidhori.”
^ ChiHeb., “Pamazuva ake ese.”